विप्लवका लागि प्रचण्ड भन्दा बाबुराम ठूलो खतरा ! – JanaSanchar.com
विप्लवका लागि प्रचण्ड भन्दा बाबुराम ठूलो खतरा !
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७३ बैशाख ८, बुधबार) २१:५८
विप्लव माओवादीले बाबुरामको नयाँ शक्तिलाई एमाओवादी भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण भएको निष्कर्श निकालेको छ । तत्कालिन राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा विश्लेषण गर्दै विप्लव माओवादीले बाबुराम भट्टराईले माओवादीबाट निराश पंक्तिलाई समेट्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
“सशस्त्र क्रान्ति हुन सम्भव नभएकोले आर्थिक क्रान्ति र विकास निर्माणको तर्क गर्ने गरेका छन् । नेपालमा छिमेकी खुसी पारेर या भारतको सहयोगमा राजनैतिक कार्य गर्नुपर्दछ भनेका छन् ।” विप्लव माओवादीको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको राजनैतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ, “यी तर्क र विश्लेषणले क्रान्तिबाट विश्वास टुटेका, थाकेका या खतरा मोल्न नचाहने हिस्सा, प्रचण्डको दोधारे कुराबाट हैरान भएका, आर्थिक विकास र समृद्धि हुनसक्छ कि भनेर राख्ने वर्ग, भारतको सहयोग लिएर राजनीति गर्ने नै व्यवहारिक राजनीतिक हो भन्ने सोच राख्ने प्रवृत्ति सबै एकपटक बाबुरामसँग पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।” दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
विप्लव माओवादीको गोप्य दस्तावेजमा अगाडि उल्लेख छ– “तुरन्तै भन्दा पनि राजनैतिक संघर्षको क्रममा यो प्रवृत्ति प्रचण्डको भन्दा चुनौती बन्ने सम्भावना छ ।” विप्लव माओवादीले बाबुरामको नयाँ शक्ति अहिले नै सरकारतिर नभई शक्ति निर्माण र अर्को चुनावको तयारीतिर केन्द्रीत भएको देखिन्छ भन्ने निष्कर्श समेत निकालेको छ ।
राजनीतिकरुपमा प्रचण्ड र बाबुरामको भण्डाफोर अभियानलाई तीब्र पारिने विप्लव माओवादीको तयारी छ । बाबुराम भट्टराईलाई मुख्य चुनौती ठानेपछि नयाँ शक्तिप्रति प्रचण्डभन्दा बढी आक्रामक हुने विप्लव माओवादीको दस्तावेजले स्पष्ट पारेको छ ।
विप्लव माओवादीको दस्तावेजको अंश
सैद्धान्तिकरुपमा भने बाबुरामको नयाँ शक्तिको विचार माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको सिर्जनात्मक विकास नभएर यसलाई नै परित्याग गरेको पलायनवादी, विसर्जनवादी, रुसी यल्तसीनको विघटनवादी पूँजिवादी धारा भएको विप्लव माओवादीको निष्कर्श छ ।
“क्रान्तिका लागि बाबुरामको धारा हाललाई अन्य धाराभन्दा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।” दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले एकवर्षको समीक्षा गर्दै पार्टी, संगठन र संघर्षका क्षेत्रमा प्राप्त उल्लेख गरेका सफलता र कमजोरीलाई समेत दस्तावेजमा समेटिएको छ । संगठन र संघर्षका क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको विप्लव माओवादीको दावी छ । यद्यपी एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशाबारे कार्यकर्तालाई स्पष्ट पार्न नसकिएको भने दस्तावेजले स्वीकार गरेको छ ।
माओवादीबीच चलिरहेको एकताको प्रयत्नलाई समेत गलत भनेको छ । दस्तावेजले मोहन वैद्य किरणको विचारको समर्थन गर्दै एकता चाहनेहरुको प्रयासलाई अर्थहीन बताएको छ ।
(२०७३ बैशाख ८, बुधबार) २१:५८ मा प्रकाशित